20,000 ton line-soo-saarista bacriminta - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Khadadka waxsoosaarka sanadlaha ah oo gaaraya 20 kun oo tan oo bacriminta isku dhafan ah ayaa isugu jira qalab casri ah. Qiimaha wax soo saarka oo hooseeya iyo waxsoosaarka wax soo saar sareeya. Khadadka wax soo saarka bacriminta ee isku jira waxaa loo isticmaali karaa isku dhafka alaabta ceeriin ee kala duwan. Ugu dambeyntiina, Bacriminta isku dhafan oo leh uruurinno iyo qaacido kala duwan ayaa loo diyaarin karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha dhabta ah, iyadoo si wax ku ool ah loo buuxiyo nafaqooyinka ay u baahan yihiin dalagyada, isla markaana xalliyaan khilaafaadka ka dhexeeya dalabka dalagga iyo bixinta ciidda.
Khadadka wax soo saarka bacriminta ee isku dhafan ayaa soo saari kara bacriminta isku dhafan ee sare, dhexdhexaad iyo hooseeya ee dalagyada kala duwan. Khadka wax soo saarku uma baahna inuu ahaado mid qallalan, maalgashi yar iyo tamar yar.
Duubista khadka wax soo saarka bacriminta ee isku dhafan waxaa loo qaabeyn karaa qaabab iyo cabbirro kala duwan si loo tuujiyo loona soo saaro qurubyo kala duwan.
Khadka wax soo saarka bacriminta ee isku dhafan wuxuu leeyahay astaamaha isticmaalka tamarta hooseeya, awoodda wax soo saar ballaaran iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee wanaagsan.
2. Khadadka wax soo saarku wuxuu qaataa granulation qalalan, isaga oo tirtiraya habka qaboojinta qalajinta oo si weyn u yareynaya soo gelinta qiimaha qalabka.
3. Qadka soo saarista bacriminta isku dhafan waa mid is haysta oo macquul ah, oo baaxeysa aag yar.
4. Habka wax soo saarka, waxaa ku yar isticmaalka tamarta mana jiro seddex qashin. Khadka wax soo saarka bacriminta ee isku dhafan wuxuu leeyahay waxqabad xasiloon, tayo la isku halleyn karo iyo nolol adeeg dheer.
5. Khadadka soo saarista bacriminta isku dhafan waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro waxyaabo cayriin oo bacriminta isku dhafan ah. Qiyaasta granulation-ka ayaa ku filan.
6. Khadadka soo saarista bacriminta isku dhafan waxay soo saari kartaa bacrimin isku dhafan oo uruurinno kala duwan leh si loo daboolo baahida macaamiisha kala duwan.
Guud ahaan marka la hadlayo, khadka soo saarista bacriminta ee isku dhafan guud ahaan wuxuu ka kooban yahay qeybaha soo socda: habka isku dhafka, geedi socodka kala-soocida, habka burburka, habka baaritaanka, habka dahaadhka iyo habka baakadaha.
1. Mashiinka Dufanka Dynamic:
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin in ka badan saddex maaddo ayaa la fulin karaa. Mashiinka wax lagu ridayo wuxuu leeyahay in ka badan seddex silos, wuxuuna si habboon u kordhin karaa oo u yareyn karaa silo iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Bixitaanka mid kasta oo ka mid ah silo, waxaa ku yaal albaab elektiroonig ah oo hawo leh. Silo hoosteeda, waxaa loogu yeeraa xamaasad, taas oo macnaheedu yahay in sagxadda hoose ee gooyuhu uu yahay suunka gudbiyaha. Waxaa la sheegay in hopper-ka iyo suunka qaadayaashu ay sudhan yihiin hal dhinac oo ka mid ah kabaalka gudbinta, dhamaadka kale ee kabaalka ayaa kuxiran dareemaha xiisadda, iyo dareeraha iyo qaybta xakamaynta pneumatic-ka waxay ku xiran yihiin kombuyuutarka. Mashiinkaani wuxuu qaataa miisaanka isugeynaya ee miisaanka elektaroonigga ah, oo si otomaatig ah uu u xakameeyo kontaroolaha dufanka, iyo saamiga miisaanka maaddad kasta ayaa isna la dhammaystirayaa markiisa. Waxay leedahay faa'iidooyinka qaabdhismeedka fudud, saxnaanta maaddada sare, hawlgal fudud iyo adeegsi lagu kalsoon yahay.
2. Xuddunta Silsilad taagan:
Isku dar waxyaabo kala duwan oo isku dhafan oo qiyaas ahaan ah isla markaana geli silsilad silsilad taagan. Qalabka ceyriinka ayaa lagu jajabin doonaa qaybo yaryar si loo daboolo baahiyaha habka soo-saarista soo socota.
3. Sheer disc taagan
Ka dib marka alaabta ceyriinka la jajabiyo, waxaa loo diraa sheyga duudduuban ee 'Vertical disc feeder', alaabta ceyriinka ahna waa la isku qasan yahay oo si isku mid ah loogu walaaqaa qasiyaha. Dahaarka gudaha ee fiicniyuhu waa polypropylene ama saxan bir birta ah. Alaabta ceyriinka ah ee leh daxalka iyo u nugulku ma sahlana in lagu dheganaado. Waxyaabaha isku dhafan ayaa geli doona granulator durbaanka.
Qaadashada tiknoolajiyada qalalan ee qalalan, habka qalajinta waa laga dhaafay. Badanaa waxay ku tiirsan tahay cadaadiska dibedda, sidaa darteed maaddada ayaa lagu qasbay in lagu cadaadiyo qaybo iyadoo loo marayo laba nadiifin oo duudduuban. Cufnaanta dhabta ah ee maaddadu waxay ku kordhin kartaa 1.5-3 jeer, sidaas awgeedna gaadhay heer xoog gaar ah. Gaar ahaan ku habboon meelaha lagu kordhiyo miisaanka lebbiska. Dabacsanaanta qalliinka iyo iswaafajinta ballaaran ayaa lagu hagaajin karaa cadaadiska dareeraha. Qalabku ma aha oo kaliya cilmiyan iyo macquul ahaan qaab dhismeedka, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay maalgashi yar, saameyn deg deg ah iyo faa'iidooyin dhaqaale oo wanaagsan.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro sheyga la dhammeeyay iyo waxyaabaha dib loo rogay. Kala shaandhaynta ka dib, qaybo u qalma ayaa lagu quudiyaa mashiinka duubka ah, iyo qaybo aan u qalmin ayaa lagu quudiyaa jajabinta silsiladda toosan si ay mar kale u noqoto granulated, sidaasna ku ogaanaya kala soocida alaabada iyo kala soocida labiska ee alaabada la dhammeeyay. Mashiinka wuxuu qaataa shaashad isku dhafan oo loogu talagalay dayactirka fudud iyo bedelka. Qaab dhismeedkeedu waa mid fudud oo jaban. Hawlgal ku habboon oo deggan waa qalab lagama maarmaan u ah soo saarista bacriminta.
6. Mashiinka Baakadaha Tirada elektarooniga ah:
Ka dib marka jajabinta la baaro, waxay ku baakadeeyaan mashiinka baakadaha. Mashiinka wax lagu baakadeeyo wuxuu leeyahay qalab otomaatig ah oo heer sare ah, isku dhafka miisaanka, tolida, baakadaha iyo gaadiidka, taas oo ogaata baakadaha xaddidan ee xawliga ah isla markaana ka dhigaya habka baakadeynta mid wax ku ool ah oo sax ah.
7. Suunka gudbinta: